Fanafihana tao Ankazobe: mpampianatra Fram sy mpimasy iray nidoboka am-ponja | NewsMada
Mpampianatra eo anivon’ny Fram sy Dadarabe iray no tena mikotrika ny fanafihan-jiolahy tao Ambolontarakely, distrikan’Ankazobe. Tokantrano maromaro indray lasibatr’ireto jiolahy ireto…
Tsy nahomby ny herin’ny fanafody! Nidoboka vonjimaika am-ponja ny mpampianatra Fram iray sy ny mpimasy iray isan’ireto atidoha nikotrika fanafihana tao amin’ny kaominina ambanivohitr’Ambolontarakely, distrikan’Ankazobe, ny herinandro teo. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary ao Ankazobe, mpampianatra Fram ny lehiben’ireo jiolahy niaraka tamin’ilay mpimasy sy ireo mpiray tsikombakomba aminy. Fantatra fa trano maromaro ny notafihin’ireto andian-jiolahy ireto. Nahitana ankizy tsy ampy taona sady mpianatra miisa telo tamin’ireto andian-jiolahy miisa sivy ireto. Ilay Dadarabe kosa, fantatra fa manao ny drafitra rehetra amin’ny alalan’ny odigasy sy ny paikady rehetra hahafahan’izy ireo manao ny fanafihana, saingy very anjavony anefa izany ka izao tratra izao ry zalahy. Nahitana olona mpanafina entana halatra tamin’ireo jiolahy ireto, raha ny tatitra nampitain’ny zandary.
Nahafeno trano iray ireo entana halatra…
Nandray avy hatrany ny andraikiny ny zandary nanao ny fanarahan-dia ireto jiolahy ireto ka noraisim-potsiny avokoa izy ireo. Nandritra ny famotorana azy ireo no nanoroany ny toerana nanafenana ireo entana halatra ao amin’ity kaominina ity ihany. Nahafeno trano iray mihitsy ireo entana halatra nangonin’ireo jiolahy tao amin’ny trano lehibe iray, raha ny fanazavan’ny zandary hatrany. Hita tao amin’io trano fanafenana entana halatra io ny panneau solaire, ny fahitalavitra, ary ireo kojakoja fampiasa an-dakozia. Niaiky ny heloka vitany ireto jiolahy ireto nandritra ny famotorana nataon’ny zandary. Fantatra, araka izany, fa manao andiany izy ireo ary samy manana ny sokajin’asany avy rehefa manao fanafihana. Maro ireo tokantrano efa nitondra faisana tamin’ireto jiolahy ireto, araka ny fitoriana napetrak’ireo niharan’ny vaky trano teny anivon’ny zandarimaria.
Distrika ahitana trangana tsy fandriampahalemana matetika ny ao Ankazobe na eo aza ny ezaka ataon’ny zandarimariam-pirenena amin’ny famongorana azy ireny. Manginy fotsiny ny lozam-piarakodia mateti-pitranga.